Ihe kpatara inwe ngalaba dị obere na-eme ka ntụgharị | Martech Zone
Ihe kpatara inwe ngalaba dị obere na-eme mgbanwe
Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 Jenn Lisak Golding
Onye nkwado teknụzụ anyị,Mpempe akwụkwọ , emeela ọtụtụ nnyocha na na-ewepụtakwu ntụgharị site na iji ụdị. Anyị rụkọrọ ọrụ ọnụ na ikpokọta nyocha kachasị mma nke gosipụtara nke ahụ Obere ụdị ala na-eme mgbanwe. N'ezie, anyị chọpụtara na ọnụego ntụgharị kachasị mma na-eme mgbe ọnụọgụ nke mpaghara onye ọrụ ga-ejupụta bụ abụọ ma ọ bụ atọ.
Ihe omuma ihe a na-enyekwa ntuziaka banyere otu esi emeziwanye gị ụdị imewe iji tọghata mgbanwe. Ejiri ụdị gị kachasị mma na ngwaọrụ niile? Font ahụ zuru oke? Ndị a bụ ajụjụ ị kwesịrị ị na-ajụ onwe gị mgbe ị na-achọ ịmepụta ụdị dị irè.
Kedu ihe ị chere? You na ọgụ na mgba ole ụdị ubi ị kwesịrị inwe?
Tags: akakabaredenjikarịcha ntụgharịụdị ubiformsmpempe akwụkwọọnụ ọgụgụ nke ubi
Jenn Lisak Golding bụ onye isi ala na onye isi oche nke Sapphire Strategy, ụlọ ọrụ dijitalụ nke na-agwakọta data bara ụba na nghọta nwere mmụọ iji nyere aka B2B ụdị merie ọtụtụ ndị ahịa ma mụbaa ahịa ROI ha. Onye na - emeri ọkaibe, Jenn mepụtara Sapphire Lifecycle Model: ihe nyocha nke dabeere na nyocha na ụkpụrụ maka ntinye azụmaahịa na-arụ ọrụ dị elu.
Medialọ ọrụ na-ere ahịa na mgbasa ozi
Usoro Inbound Marketing
Ọkt 16, 2012 na 1:01 PM
Ozi dị mma, ị maara ma nsonaazụ dị iche na weebụsaịtị B2B ma e jiri ya tụnyere B2C?. M na-ekwu na ndị ọrụ B2B na-adịkarị mfe iji mejupụta ụdị ndị ahụ?
Ọkt 16, 2012 na 4:24 PM
Data e nyere na nke a na-emekọ weebụsaịtị B2B. Agbanyeghị, mgbe anyị na-abanye na data sitere na B2B na B2C, enweghị ọtụtụ ọdịiche na nsonaazụ, belụsọ n'ihe banyere ecommerce. Ọ bụrụ na enwere nhọrọ maka onye ọrụ ịbanye dị ka ọbịa kama ịnye ozi ha ma mepụta akaụntụ, ha ga-abanye dị ka ọbịa kama. Echere m, dabere na ahụmịhe m na Formstack na dịka onye ọrụ, na ọ bụ ezi uche dị na ya iche na ndị ọrụ B2B na-adịkarị mfe idejupụta ụdị.
Ọkt 17, 2012 na 4:38 AM
Daalụ maka nkọwa